Sii-hayaha Wasiirka Gargaarka oo kulan wada-tashi ah ka furay Muqdisho | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Sii-hayaha Wasiirka Gargaarka oo kulan wada-tashi ah ka furay Muqdisho
Sii-hayaha Wasiirka Gargaarka oo kulan wada-tashi ah ka furay Muqdisho
Sii-hayaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa furay kulan wada-tashi ah oo looga hadlaayo sidii hay’adaha aan dowliga ahayn Galmudug uga taageeri lahaayeen fulinta adeegyada gargaar ee asaasiga ah.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb-galaya mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, mas’uuliyiin ka socota dowlad goboleedka Galmudug iyo wakiilo ka socda hay’adaha aan dowliga aheyn ee ka howlgala dalka.
Sii-hayaha wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xamsa Saciid Xamsa ayaa ugu baaqay hay’adaha aan dowliga aheyn in ay badiyaan adeegga ay ka bixiyaan degaannada Galmudug.
Mas’uuliyiinta ka socday hay’adaha aan dowliga aheyn ayaa dhankooda waxaa ay balan qaadeen inay xoojin doonaan dardar gelinta sidii degaannada galmudug looga fulin lahaa adeegyada gargaarka aas’aasiga ah.
Sii-hayaha Wasiirka Gargaarka oo kulan wada-tashi ah ka furay Muqdisho was last modified: September 30th, 2020 by Admin
Xoghayaha Difaaca Mareykanka oo socdaal ku marayo qaar ka mid ah dalalka Carabta ee Afrika ka tirsan
Faahfaahin Qaraxyo Khasaare geystay oo kakala dhacay Muqdisho & Kismaayo
Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo amartay in baaritaan lagu sameeyo shaqaalaha dowladda